Archives Race — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Intii aan samayn qabaa in ay qabow iyo yaab leh, Uma maleynayo waa sida cajiib ah sida qaar ka mid ah ka dhigi soo baxay inay noqon. Maalin kasta waxaa jira…
Qalbigaygu waa culus yahay. Waan ogahay, Ilaah waa u roon yahay, iyo in uu gacanta ku, laakiinse qalbigaygu waa culus yahay.
Todobaadkii hore ka dib dhacdooyinka ee Ferguson (iyo jawaabaha waa in ay warbaahinta bulshada), Waxaan dareemay culays loo qoro gabay. My goolka ahaa in aan wax statements grand ama caddayn, laakiin si ay u muujiyaan hab ah in wax walba oo i dareensiisay. Sidaas Waxaan bilaabay qoraal, oo waxanuna waa waxa ka soo baxay. dareenka ah in celiyay in aan maanka ku jiray: "Waxa ay I jirey ayaa laga yaabaa."
Waxaan post a oo dhan diyaar ku saabsan sida Masiixiyiintu waa jawaab jeer sidan oo kale ahi lahaa, laakiin ka dib markii warka ku saabsan Eric Garner shalay, Waxaan go'aansaday inaan sugnaa oo aan post in ka dib. Hadda, Waxaan kaliya doonayaa in la sheego in aan qabo qalbi culus. ma xiiso doodaha ama dood Waxaan ahay hadda. Waxaan kaliya doonayaa inaan xor u yahay inuu muujiyo waxyeelladayda.
Waxaan waxyeelo sababtoo ah in Eric Garner video waxaa ba'an si ay u daawadaan. Marka aniga iyo xaaskeyga waan ugu horeysay waxaa daawaday bilood ka hor, annaga qayliyey. Life waa hadiyad qurux badan, waana inkaa si ay u daawadaan nolosha in ka tago qof ee jidhka - gaar ahaan marka uu qaaday by dadka kale. waxaan u maleeyay, "Sida xaqiiqada ah dadku ma heli karo la iska…
Waxaan kor u xajisay sheekada taxanaha ah Trayvon Martin tan iyo bilowgii. Sida qaar badan oo idinka mid ah waxaan daawaday caymiska wararka, akhriyo articles ah, oo ka hadlay waxa ku saabsan saaxiibada. Waxaa heysatay wada hadalka dadweynaha oo ku caasiyoobeen dood badan loo baahan yahay oo ku saabsan tartanka in America. Xaqiiqda fool xun of cunsuriyada ahaa riixay hore ee wejigayagii, iyo xataa kuwa jecel yihiin in ay iska u kajirin waxaa lagu qasbay in ay ka hadlaan waxa ku saabsan.
In ka badan hal sano ka dib, dilaaga Trayvon ayaa isku dayay laakiin kama ay helin eed. Ma taas micnaheedu waa in aynu ka guurto on ka arrimaha? Waxay helay isaga oo aan waxba galabsan, saas oo kalay kuwanuna "arrimaha tartanka” waa in aan sida dhabta ah sida aan u maleeyay in ay ahaayeen, xaq u? Taasi ma noqon karaan kuwo sii runta ka. Waxaan leeyahay qorshaha ugu jirin ka doodaan xaqiiqooyinka, Trayvon qof, ama xukunka in xaaladda this naxdin leh, laakiin waxaan samayn qabaa dood qaar ka mid ah waa in ay sii wadaan. maxkamadda waa in ka badan, laakiin wada hadalka waa in aanay noqon.
Maxaad Interest ah?
Waxaan ognahay inay jiraan dad badan oo la yaabanahay sababta ay maxkamad this gaar ah ayaa qabsaday dareenka aad u badan. Qaar kale la yaabanahay sababta ay qaar ka mid ah dadka waawayn madow yihiin si deg deg ah ka nixi Trayvon Martin, inkastoo xaqiiqda ah in uu lahaa arrimaha isaga u gaar ah. Ka dib oo dhan,…